स्वास्थ्य सम्बन्धि जानकारी – Page3– nepaliSamachar.com नेपालीसमाचार
जितेन राई र मेलिना राईको स्वरमा रहेको सुनमाईको उकालो" सार्बजनिक(भिडियो)
Homeअन्य थप >>स्वास्थ्य सम्बन्धि जानकारी
युरिक एसिड हुने कारण र यसबाट बच्ने ८ उपाय
June 9, 2017 नेपाली समाचार 0
काठमाण्डौ । युरिक एसिड रगतमा नभई नहुने महत्वपूर्ण तत्व हो। यसले शरीरमा ‘एन्टी अक्सिडेन्ट’को काम गर्छ। तर, युरिक एसिडको मात्रा चाहिनेभन्दा बढी भएमा यसले जोर्नीहरुमा समस्या ल्याउँछ र ‘गाउट’ भन्ने रोग लाग्छ। युरिक एसिडलाई एक प्रकारको बाथरोगका रुपमा बुझ्न >>>
भाइरल ज्वरोको लक्षण र यसबाट बच्ने उपाय
June 3, 2017 नेपाली समाचार 0
काठमाडौं । गर्मीको मौसम छ, सामान्य अवस्थामा पनि भाइरल ज्वरोले दु:ख दिन सक्छ । यस्तो अवस्थामा एकदमै सचेत हुनु जरुरी छ । यदि तपाई भाइरल ज्वरोले प्रभावित हुनु भएको छ भने तपाईलाई फ्लू वा त इन्फलूएन्जा जस्तो संक्रमण पनि >>>
यौन क्षमता वृद्दि गर्ने अचुक उपाय : खानुहोस् यी खाना
June 1, 2017 नेपाली समाचार 0
एजेन्सी । बैबाहिक जीवनको शुरुवातमा जोडीहरुमा जुन यौनिक उत्साह देखिन्छ । त्यो विस्तारै कम हुँदै जान्छ । र यही यौन उदासिनताका कारण कतिपय जोडीमा असन्तुष्टी बढ्दै जाने र सम्बन्ध नै विग्रने समेत हुन्छ । खासमा यौन चाहाना कम हुँदै >>>
अनारको बोक्रा स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक
May 24, 2017 नेपाली समाचार 0
अनारको दानाको जति फाइदा छन्, त्यति नै गुणकारी हुन्छ यसको बोक्रा । अनारको बोक्रालाई सुकाएर त्यसको पाउडर बनाउँनुहोस् र सिसाको बट्टामा राख्नुहोस् । वा त्यसलाई पिसेर रस बनाएर राख्नुहोस् । मुटु रोगबाट बचाउँछ – अनारको बोक्रामा धेरै एन्टिओक्सिडेन्ट हुन्छ, जसले >>>
यी रोगहरुका लागि अमृत समान हो भिण्डी
May 23, 2017 नेपाली समाचार 0
एजेन्सी । भिण्डी निकै नै लोकप्रिय तरकारी हो । प्राय सबै ठाउँमा पाईँने भिण्डी तरकारी एवम् अचार बनाएर खाईन्छ । यो खानुमा जति स्वादिष्ट छ, त्यति नै गुणकारी पनि छ । हामीले भिण्डीलाई स्वादका आधारमा तथा यसको चिप्लोपनाका आधारमा स्वादिष्ट >>>
May 22, 2017 नेपाली समाचार 0
बेडरुममा पुरुषले आफ्नो पुरुषत्व प्रदर्शन गर्न सकेन भने मानिसको दाम्पत्य जीवनमा असर गर्छ भन्ने भनाई अब नयाँ रहेन । तर कम उत्तेजित हुने मानिसको आयुमा समेत असर गर्ने नयाँ तथ्य भेटिएको वैज्ञानिकहरुले दाबी गरेका छन् । कम उत्तेजित हुने पुरुषमा >>>
धेरै सेल्फी लिने ब्यक्तिलाई ‘सेल्फी इल्बो’ को शिकार बन्ने अधिक सम्भावना
एजेन्सी । आजभोलि एउटा सानो कोठामा घन्टौसम्म मोबाईल खेलाउँदा खेलाउँदै नसा सम्बन्धि गम्भीर समस्या लिएर आधुनिक किशोर किशोरी नसा विज्ञका आपत्कालिन सेवा लिन थालेका छन् । हो, अत्यधिक मेसेज टाइप गर्दा वा मोवाइल चलाउँदा औला खेलाउँदा र नसामा समस्या बढेको >>>
के तपाई यसरी घोप्टो परेर यसरी सुत्नुहुन्छ ? त्यसो भए सावधान
May 21, 2017 नेपाली समाचार 0
एजेन्सी । कतिपय मानिसको घोप्टो परेर सुत्ने बानी हुन्छ, जसले गर्दा पेट थिचिन्छ । यसरी सुत्दा कतिपयलाई आनन्द आउँछ र मज्जाले निद्रा लाग्छ । तर यसरी सुत्दा धेरै स्वास्थ्य समस्याहरु आउन सक्छन।यस्ता छन बेफाईदा… . पेटमा बल लगाएर घोप्टो परी >>>
अदुवा खानुका फाईदा मात्रै होईन, यस्ता डरलाग्दा बेफाईदा पनि छन्
May 19, 2017 नेपाली समाचार 0
काठमाडौं – अदुवाको सेवन हाम्रो स्वास्थ्यका लागि फाईदाजनक हुन्छ। तर आवश्यकता भन्दा बढि अदुवा खानाले हाम्रो स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पुर्याउछ। धेरै अदुवाको सेवनले मानिसमा विभिन्न खाले स्वास्थ्य समस्या सिर्जना गर्दछ। जान्नुहोस् अधिक अदुवा सेवन गर्नुका बेफाईदा :- – मधुमेहका >>>